Warbixin – Sida loo arko wax-qabadka Qurba-joogta Soomaaliyeed. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka July 17, 2017	0 286 Views
Muqdisho (Himilonews) – Taniyo markii uu soo gurya-noqday, Abdirizak Xasan Maxamed wuxuu ku shaqo bilaabay aqoontii uu kasoo bartay dibadda. Waana mid uu ku doonayo inuu ku badalo ku tiirsanaanta dadkeennu ku tiirsanaaday aqoonta shisheeyaha.
“Waxaan soo bartay cilmiga badaha, waxaana hadda aan ku shaqeeyaa sida loo hago soo xirashada iyo hannaanka loo dejiyo loona hubsado badqabka badeecada iyo alaabadaha kale ee saaran maraakiibta,” ayuu u sheegay Himilo FM Abdirizack oo muddo ku dhow 15 sano ku maqnaa dibadaha.
“Waxaan rabnaa inaan badalno fikradda ah inaan in badan lagu sii tiirsanaanin aqoonta iyo xoogga shisheeyaha oo aan annagu buuxinno booskaas.”
Kolkii Abdirizak uu ka haajirayay dalka maanu filayn inuu lasoo laaban doono cilmigan. Balse goor walba waxaa dubaaqiisa ku weynaa inuusan baran laamaha cilmiga ee dalka laga dhigto.
“Aniga markii hore waxaan jeclaan jiray barashada wax gaar iiga bixin kara aqoonyahannada kale,” ayuu yiri. “Micnahayga, waxaan dooni jiray inaan wax cusub oo aan dalka laga aqoonin soo barto. Taasina waxay ahayd lama huraan inaan dibadda ugu baxo.”
Kadib muddo dheer oo uu kusoo qaatay dibadda, Feisal Maxamed Cabdalla wuxuu sidoo kale go’aansaday inuu dalkiisa kusoo noqdo. Wuxuuna bilaabay shaqo fursad ahaan kaga bannaaneyd suuqyada dalka taas oo sida uu sheegayo kaalin muhiim ah kaga jirta dhaqdhaqaaqa ganacsiga.
“Dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaan ku sugnaa dunida Carabta, waxaana markii aan ogaaday in dalku kusoo laabanayo jawi degan aan go’aansaday inaan fikradda aan jeclaa kusoo biiriyo ganacsiga ahaan,” ayuu yiri Feisal oo xarun iibisa qalabyada ciyaaraha oo lagu magacaabo Shiners ka furtay Muqdisho.
“Qof walba waxa uu wax ka yaqaan hiwaayadiisa. Aniga ahaanna, yaraaantaydii waxaan jeclaa ciyaaraha, waxaana ku fikiray inaan ganacsi u badalo.”
Hayeeshe sidaas oo ay hadalka u wada dhig dhigayaan, kama dhigna in loola wada dhacsan yahay. Waxaa la isku maandhaafay wax qabadkooda. Abdiqadir Tahliil Rooble oo kamid ah da’yarta Muqdisho ayaa rumeysan in qurba-joogtani la timid wax aan dheef u lahayn iyaga.
“Soo laabadkoodu ma ahan mid la mahdiyay, waayo wax walba way nagu qaaliyeeyeen. Guryihii shalay kiro ahaan loogu jiray 100$ maanta waa 700$,” ayuu yiri Abdiqaadir.
“Maxaan ka weyn arrintan oo ay nagu soo kordhiyeen?” ayuu is-weydiiyay isaga oo xusay in imaantinkoodu ahaa bilowga caqabad ee danyar badan oo ganacsigooda yaryari iska ahaa meel dhaxaad kuwaas oo aan hadda sidii hore u halgami karin.
In kasta oo sida hubaasha ay qurba-joogtu qurbaha kala timid waaya’aragnimo siyaalo badan loogu baahnaan karo, hadana Abdiqadir uma arko middaas is-baddalkii ay u baahnaayeen. Wuxuuna mararka qaar ku dhaliilaa inay caqabad ku noqdeen go’aannada masiiriga ah ee noloshooda.
“Diasbarooy, runta aan isku sheegnee wax walba waad ka badbadiseen. Xataa gabdhihii aan jeclayn waxaad ku indha-sarcaadiseen adduun lacageed. Meel uu jeebku hadlayana, jaceylku malahan mudnaan. Marka maxaad ula duuli la’dihiin gayaankiinna idin la midka ah heer dhaqaale ahaan?” ayuu hordhigay.
Balse qof kasta oo sida Abdiqadir ku koray dalkiisa, lama qabo fikradiisa. Dad badan sida Xamza bin Xamza ayaana kamid ah.
“Horumarka maanta socda Ilaahay ka sokow, waxaa mahadeeda loo celinayaa qurba-joogta oo dalka kusoo kordhiyay waxyaalo badan oo aan laga aqoonin,” ayuu Xamza u sheegay Himilo FM.
Imaanshaha qurba-joogtu waxay ka dhigan tahay iba-furka irid cusub oo horumar iyo dhaqaale u horseedi kara dalka. Waana mid uu ku hal-adag yahay Xamza.
“Sideedaba, waa inaad tallaabada adduunku ku socdo hadba heer ula jaanqaado, macquul ma ahan inaad kusii nagaato sidaadii hore; waa inaad barataa sida loola fal-galo adduunkan is badalaya had iyo jeer.”
Si kastaba in la qiro sida waaya’aragnimada kala duwan ee qurba-joogtu dalka kusoo biirisay loogu ooman yahay, waxaan ku hubsan karnaa is-dhexgal ku qotoma is-weydaarsiga fikradaha ku gaaxsan gudaha iyo kuwa ay godlanayaan dibad-joogtu.
Inaan lagu baraarugin middaas waxay iyaduna la imaanaysaa natiijo aan loo aayin. Taasina waa farriinta ugu danbeysa ee Abdirizak Xasan Maxamed uu u dirayo bulshadiisa.
“Kolay kan tagay ee soo noqday iyo midka dalkiisa ku sugnaaday labadaba way u siman yihiin dalkooda. Waxaana muhiim ah inay mideeyaan fikradahooda si ay wadanka u horumariyaan. Haddii kale dunida kale ayaan kasii hoos maraynaa waligeen.”
Previous: 15 July – Maalinta Caalamiga ee Xirfadaha Dhalinyarada.
Next: Musuqmuusuq – Dhaxalka Faqriga!
Gabdho 11-Jirro ah oo laga dhillaysan jiray oo lasoo sama-bixiyey
Sifada ay Wadaagaan Soomaalida iyo Ibliiska.